WAR DEG DEG AH:Jawiga caawa ee jiidaha Tukaraq oo cakiran & Ciidamada Somaliland oo amar culus la siiyey + Dagaal cusub oo…. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH:Jawiga caawa ee jiidaha Tukaraq oo cakiran & Ciidamada Somaliland oo amar culus la siiyey + Dagaal cusub oo….
August 20, 2018 Puntland PL
GAROOWE(P-TIME)– Wararkii ugu dambeeyey ee caawa Puntlandtimes.com ay ka helayso deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaasi laga dareemayo xiisad u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo Somaliland oo weli isku hor fadhiya jiidaha dagaalka ee deegaankaasi.
Xiisaddani oo sababi karta dagaal ka dhex qarxa Puntland iyo Somaliland ayaa ka dhalatay kadib markii saraakiisha ciidanka Somalilad amar lagu siiyey in ay ku dagaalamaan deegaankaasi kadib hadal kasoo yeedhay madaxda dowladda Puntland.
Saraakiisha ciidanka Somaliland ayaa waxaa la sheegay in ay ciidamada ku amreen inaysan ka bixi karin goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanka Tukaraq isla markaasna ay u diyaar garoobaan dagaalka Puntland ku dhawaaqday.
Dhanka kalena saraakiisha ciidamada Puntland oo aan xidhiidh la samaynay ayaa sheegay in aysan wax walw al ah ka qabin dhaq dhaqaaqa iyo hubka Somaliland ay soo ridayso dhowaana ay gacanta ku dhigi doonaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Gudiga difaaca dowladda Puntland oo maalinimadii shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa beeniyey in wax heshiis ay labada dhinac ka gaadheen xiisadaha deegaanka Tukaraq, iyagoona cadeeyey in Puntland ay qaadayso dagaalkii xoreynta gobolka Sool.
WAXAN KULA TALIN LAHAA MAAMULKA PUNTLAND SOOMAALILAND WAXBA KA QAADI KARAYN ISLA MARKAASNA AY KA GO ANTAHAY NABAD